Ruushka oo cambaareeyay cunaqabateynta Maraykanka ee ka dhanka... | Universal Somali TV
Ruushka oo cambaareeyay cunaqabateynta Maraykanka ee ka dhanka ah Moscow
Dawlada Ruushka ayaa wacad ku maray in ay ka jawaabi doonto cunaqabateynta Maraykanka ee ka dhanka ah Moscow, ka dib markii Washington ay ku soo rogtay cunaqabatayn hor leh ee doorka Ruushka uu ku leeyahay Ukraine .
Wasaarada Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa ku sheegtay war-murtiyeed Jimcihii, dhowr saacadood ka dib markii Maraykanku ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo ka dhan ah Moscow in xayiraadaha aan caqli-gal ahayn aan lagu guulaysan doonin, mana keeni doonto wax natiija ah.
Cunaqabataynta cusub ayaa ku dartay 21 qof, oo ay ku jiraan Wasiir Ku-xigeenka Tamarta Ruushka Andrey Cherezov, iyo sagaal shirkadood oo ku jira liiska cunaqabateynta ay Washington ku eedeesay fara-galinta joogtada ah ee ka socota Ukraine.
"Haddii dawlada Maraykanku ay doorbido in ay burburiso xiriirka dhaqaale ay la leedahay Ruushka, waa xuquuqdooda, maadaama ay tahay anagana xuquuqdeena inaa ka jawaab bixino," ayaa lagu yiri hadal kasoo baxay dawlada Ruushka.
Washington iyo xulafadeeda ayaa horay u saaray cunaqabatayn dhaqaale oo ka dhan ah Ruushka iyada oo lagu eedeynayo taageerada ay siiyaan ciidamada gooni u goosadka Ruushka xiriirka la leh ee bariga Ukraine iyo isku-keenista Crimea iyo Ruushka ka dib aftidii sanadka 2014-ka.
Dagaalka hubaysan ee bariga Ukraine, oo ay bilowday xukuumada Kiev ka dib markii ay ciidamo u dirtay si ay ula dagaallamaan kooxaha doonaya madax-bannaanida dimoqraadiyada ee gobolka looga hadlo luuqada Ruushka, ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10,000 oo qof.
Kan-xigaDawladda Maraykanka oo lagu eedeeyay ...
Kan-horeTurkiga oo Mareykanka uga digay inay ...
64,699,937 unique visits